Thenga i-Pyridoxal-5-phosphate iMohohydrate (41468-25-1) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Pyridoxal-5-phosphate iMohohydrate
Akukho kalo SKU: 41468-25-1. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Pyridoxal-5-phosphate i-Monohydrate (i-41468-25-1), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Pyridoxal-5-phosphate iPowohydrate powder, I-Vitamin B6 metabolite eyenziwa njenge-coenzyme kwiimpembelelo ze-transamination ngokwenza uxhumano lwe-Schiff-base kunye namaqela e-lysine kwi-aminotransferase. Kwakhona isebenza njenge coenzyme kwezinye i-decarboxylation kunye neempendulo zokuhlanjululwa. Unokuguqula i-lysyl ne-valyl insalela kwiiprotheni. Ngaba unako ukuvimbela i-receptors ye-purinergic kunye ne-intracellular influx ye-Ca2 +.
I-Pyridoxal-5-phosphate ividiyo ye-Monohydrate
I-Pyridoxal-5-phosphate i-Monohydrates Abalinganiswa abasisiseko
igama: I-Pyridoxal-5-phosphate iMohohydrate
I-molecular Formula: C8H12NO7P
Isisindo somzimba: 265.16
Melt Point: 2-8 ° C
Isitoreji sokugcina: Ukushisa kwamagumbi
umbala: Pale Yellow Crystalline
I-Pyridoxal-5-phosphate umjikelezo weMonohydrate
Amagama eKhemikhali: I-Pyridoxal- 5'-phosphate monohydrate, i-3-Hydroxy-2-methyl-5 - ([phosphonooxy] methyl) -4-pyridinecarboxaldehyde
Amanye amagama: I-Vitamin B6, i-Pyridoxal Phosphate, i-PLP
I-Pyridoxal-5-phosphate I-Monohydrate Ukusetyenziswa
I-vitamin B6 metabolite eyenziwa njenge-coenzyme kwiimpembelelo ze-transamination ngokwenza uxhumano lwe-Schiff-base kunye namaqela e-lysine kwi-aminotransferase. Kwakhona isebenza njenge coenzyme kwezinye i-decarboxylation kunye neempendulo zokuhlanjululwa. Unokuguqula i-lysyl ne-valyl insalela kwiiprotheni. Ngaba unako ukuvimbela i-receptors ye-purinergic kunye ne-intracellular influx ye-Ca2 +.
Yiyiphi imilinganiselo yePyridoxal-5-phosphate Monohydrate
I-PLP iluncedo ekutshintsheni i-lysyl kunye ne-valyl isalayi kunye nemisebenzi njenge-coenzyme ekuphenduleni kwe-transamination ngokwenza uxhumano lwe-Schiff-base kunye namaqela e-lysine kwi-aminotransferase
I-PLP yindlela esebenzayo ye-vitamin B6
Kwakhona isebenza njenge coenzyme kwezinye i-decarboxylation kunye neempendulo zokuhlanjululwa
I-Pyridoxal-5-phosphate i-Monohydrates isebenza njani
I-Pyridoxal phosphate (i-PLP, i-pyridoxal 5'-phosphate, i-P5P), uhlobo olusebenzayo lwe-vitamin B6, luyi-coenzyme kwiindlela ezahlukeneyo zokuphendula nge-enzymatic. Ikhomishini ye-Enzyme ikhathaze ngaphezu kwezinto ezixhomekeke kwi-140 PLP, ehambelana ne- ~ 4% yazo yonke imisebenzi ehleliwe. Ukuxhatshazwa kwe-PLP kubangelwa ukukwazi ukubophelela ngokukhawuleza i-substrate, kwaye ke ukwenza njengesixhobo sokwenza i-electrophilic catalyst, ngaloo ndlela ukuzinzisa iintlobo ezahlukahlukeneyo ze-interbaniate reaction response.
I-PLP isebenza njenge-coenzyme kuzo zonke iimpendulo zokuhambisa i-transamination, kunye ne-decarboxylation ethile, i-deamination, kunye neempendulo ze-amino acid. Iqela le-aldehyde le-PLP lenza i-Schiff-base link (i-aldimine yangaphakathi) kunye ne-ε-amino yeqela lysine ethile ye-aminotransferase enzyme. Iqela le-α-amino le-amino acid substrate lichitha i-ε-amino iqela le-asethi ye-lysine esebenzayo kwindawo ebizwa ngokuba yi-transaldimination. I-aldimine yangaphandle ephumela ngaphandle ilahlekelwa iproton, i-carbon dioxide, okanye i-amino acid sidechain ukuba ibe yi-quinoid ephakathi, leyo leyo ingakwazi ukwenza njenge-nucleophile kwiindlela ezininzi zokuphendula.
Kwi-transamination, emva kokuphazamiseka kwe-quinoid ephakathi kwamkela iproton kwindawo ehlukileyo yokuba yi-ketimine. I-ketimine ephumela ekubeni i-hydrolysed ukuze iqela le-amino lihlale lincomekayo. Ukongezelela, i-PLP isetyenziswa ngama-aminotransferase (okanye i-transaminases) ezisebenza kwiishukela ezingavamile ezifana ne-perosamine kunye ne-desosamine. Kule mpendulo, i-PLP iyayiphendula ne-glutamate, leyo idlulisela iqela layo le-alpha-amino kwi-PLP ukwenza i-pyridoxamine phosphate (PMP). I-PMP ize idlulisele i-nitrogen yayo kwiswekile, yenza i-amino ishukela.
I-PLP ibandakanyeka kwiimpendulo ezahlukeneyo ze-beta-elimination ezifana neempendulo ezenziwa ngu-serine dehydratase kunye ne-GDP-4-keto-6-deoxymannose-3-dehydratase (ColD).
Kusebenza kwakhona kwimpendulo yokunciphisa kwi-heme synthesis. I-PLP idlala indima ekuguquleni i-levodopa kwi-dopamine, iququzelela ukuguqulwa kwe-glutamate ye-neurotransmitter ye-neurotransmitter ye-neurotransmitter ye-inhibitory GABA, kwaye ivumela i-SAM ukuba yenziwe i-decarboxylated ukuze ifake i-propylamine, eyi-precursor ye-polyamines.
Le yindlela esebenzayo ye-VITAMIN B 6 ekhonza njenge-coenzyme yokuhlanganisa ama-amino acid, i-neurotransmitters (i-serotonin, i-norepinephrine), i-sphingolipids, i-aminolevulinic acid. Ngexesha lokudluliswa kwe-amino acids, i-pyridoxal phosphate iguqulelwe ngokukhawuleza ibe yi-pyridoxamine phosphate (PYRIDOXAMINE).
I-Pyridoxal Phosphate yindlela esebenzayo ye-vitamin B6 kunye ne-coenzyme ye-pyridoxal phosphate (PLP). I-PLP ibandakanyeka kwi-enzymatic transamination ezininzi, i-decarboxylation kunye neempendulo zokuhlanjululwa; kuyimfuneko yokwenziwa kwe-amino acids kunye ne-amino acid metabolites, kunye nokwabelana kunye / okanye ukugubha i-catabolism ye-neurotransmitters ethile, kuquka ukuguqulwa kwe-glutamate kwi-gamma-aminobutyric acid (GABA) kunye ne-levodopa kwi-dopamine. I-PLP ingasetyenziselwa ukongeza isondlo kwiimeko ze-vitamin B6. Amanqanaba athatywayo we-PLP kwingqondo angabangela ukungasebenzi komzimba.
Pharmacology evela kwi-NCIt
Le yindlela esebenzayo ye-vitamin B6 ekhonza njenge-coenzyme yokuhlanganiswa kwama-amino acids, i-neurotransmitters (i-serotonin, i-norepinephrine), i-sphingolipids, i-aminolevulinic acid. Ngexesha lokuguqulwa kwe-amino acids, i-pyridoxal phosphate iguqulelwa ngokukhawuleza ibe yi-pyridoxamine phosphate (pyridoxamine). - uPubchem; I-Pyridoxal-phosphate (i-PLP, i-pyridoxal-5'-phosphate) yintsebenziswano yamanyathelo amaninzi e-enzymatic. Leyo ifomu esebenzayo ye-vitamin B6 equkethe izinto ezintathu zendalo, pyridoxal, pyridoxamine kunye ne-pyridoxine.
I-Pyridoxal-5-phosphate i-Monohydrates Raw Recipes
I-Pyridoxal-5-phosphate I-Monohydrates Marketing
Ngaba i-Pyridoxal-5-phosphate i-Monohydrates ineziphumo eziphambili
Indlela yokuthenga iPyridoxal-5-phosphate iMohohydrate esuka kwi-AASraw
I-Bortezomib powder (179324-69-7)
Mitoxantrone HCL powder
I-Lorcaserin (Belviq) ipowder
Indlela yokwenza i-Testosterone Cypionate iphelile kwi-Raw Steroid Powders
Iyintoni i-yohimbine kwaye isebenza njani?